Tinotaura naAna Rivera Muñiz naFátima Martín Rodríguez, Torrente Ballester Mubayiro 2017 | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Hurukuro, Vanyori, Mabhuku, Novela
Mufananidzo wepamusoro wekuremekedzwa naAna Rivera.
Iyo Asturian Ana Lena Rivera Munoz uye iyo Tenerife Fatima Martin Rodriguez yaive iyo vakundi ve XXIX Torrente Ballester Prize 2017, yakapihwa kekutanga ex aequo wekupedzisira Zvita. Nhoroondo dzavo dzakasiyana Izvo vakafa vanonyarara y Iyo kona yehuze ivo vakafanirwa nemubairo we "yavo yemhando yepamusoro", maererano nejuri remakwikwi.
Tine rombo rakanaka kuva Ana Lena Rivera Muñiz mune ino inozvininipisa timu yevanyori yeActualidad Literatura. Nhasi takataura nevanyori vese nezve mubairo, mabasa avo, mabasa uye zvirongwa zvemunguva yemberi.
Munguva yakapfuura XXIX edition yeiyo Torrente Ballester Mubairo rondedzero muSpanish, yakazara ye411 isina kunyorwa mabasa nevanyori vanobva munyika dzinopfuura gumi nesere vakapinda Uyu mubairo akaberekwa muna 1989 uye chakapihwa 25.000 euros uye iyo edition yekopi inokunda.
1 Fátima Martín Rodríguez (Santa Cruz deTenerife, 1968)
3 Yedu hurukuro
3.0.1 Uchiri kucherechedza mubairo uye kubudirira? Tiudze kuti zvaive sei chiitiko.
3.0.2 Iwe unofunga chii iwe mubairo uyu unounza iwe mukuwedzera kune iyo budiriro uye kuzivikanwa?
3.0.3 Chii chaunogona kutaura mumitsara miviri nezve Izvo Vakafa Vakanyarara uye Iyo Angle yeHaze?
3.0.4 Ndeapi mapurojekiti matsva auri kuita nawo?
3.0.5 Chero kunyepedzera nemanovels ako kana iwe unongoda kutaura nyaya?
3.0.6 Nderipi bhuku rekutanga raunorangarira kana kuverenga? Uye imwe inokumisikidza zvine mutsindo kuti uzvipire kunyorera?
3.0.7 Ndivanaani vanyori vako vakuru? Uye ane simba kwazvo pabasa rako?
3.0.8 Iwe unayo chero mania kana tsika kana uchinyora?
3.0.9 Uye kana iwe wapedza, iwe unobvunza nharaunda yako kuti uwane maonero, kuraira kana kururamisa?
3.0.10 Ungatsanangura sei masitaera ako?
3.0.11 Ibhuku ripi rauri kuverenga izvozvi?
3.0.12 Iwe unotsunga kupa rimwe zano kune avo vanyori vari kutanga kutanga?
Fátima Martín Rodríguez (Santa Cruz deTenerife, 1968)
Canaria, Bachelor of Information Sayenzi, kuComplutense University yeMadrid, uye nedzidzo dzakatangwa muFine Arts, kuYunivhesiti yeLa Laguna. Munyori we Iyo kona yehuze, inoverengeka yakapihwa neTorrente Ballester Prize 2017, yakadzidziswa kuCanary Islands Chikoro cheLiterary Creation. Akagamuchira iyo Orola Mubairo weZviitiko mu2012 uye wechitatu mubairo muCultural Field Micro-nyaya Contest muna 3. Akagadzira mafoto uye mapikicha ekuona akadai se Chiedza cheMashoko (kutora mifananidzo uye haiku nhetembo neF / 7 Co-ordinate Collective uye mudetembi Coriolano González Montañés), uye Archetypes, basa rakasarudzwa muZvitsvagwa PHOTOESPAÑA 2012, pakati pevamwe.
Asturian uye anogara muMadrid, ane degree muMutemo uye Bhizinesi Rekutungamira kubva ICADE uye munyori wenyaya yematsotsi akateedzana naGracia San Sebastián. Mhosva yako yekutanga, Izvo Vakafa vakanyarara, Izvo hazvigone kuve zvakabudirira zvakanyanya nekupihwa kweiyo Torrente Ballester Award 2017 uye wekupedzisira mubairo weiyo Fernando Lara mubairo muna Chivabvu wegore rimwe chetero.
Isu tinopa mimwe mibvunzo kuti iwe utiudze zvimwe nezve rako rehunyanzvi uye rekunyora basa, ako epamberi mapurojekiti uye zvimwe zvimwe zvakanyanya zvimwe zvinhu. Uye isu tinokutendai pamberi pezve dzenyu mhinduro dzinopfuura dzechokwadi dzinonakidza.
Uchiri kucherechedza mubairo uye kubudirira? Tiudze kuti zvaive sei chiitiko.
Ana: Manzwiro ekuona basa rako richizivikanwa mubairo pamwe nemukurumbira weTorrente Ballester ibhavhu risingaenzanisike remweya. Iri ibasa rakasurukirwa uye uchizviona uchizivikanwa nevanhu vazhinji uye nematanho ekunyora se serotonin kick. Mamiriro akasarudzika emubairo uyu wakapihwa vanyori vaviri panguva imwechete vakave hunyanzvi hwakawedzerwa: vakandibvumidza kusangana naFatima, mumwe wangu, munyori akasarudzika, wekugovana naye mazano, mapurojekiti nezviroto zvisina mumwe munhu kunze kweizvi nyika uye yeiyi hunyanzvi inogona kunzwisisa uye kunzwa.
Fatima: Icho chaive chiitiko chisingatarisirwe chakapfuura zvese zvandaitarisira. Ini ndazviratidza mumakwikwi makuru aya ndichirota kuve mumwe wegumi nemasere ekupedzisira sarudzo, asi ini handife ndakambofungidzira mhedzisiro iyi neruzivo rwangu rwekutanga; ichiri kufanira kufananidzwa. Mhemberero yekupa mubairo muLa Coruña yainakidza uye Kanzuru yeProvince yakatitsigira zvakanyanya. Icho chokwadi chekuti chakaendeswa kekutanga kune vanyori vaviri ex aequo Izvo zvave zvakanaka uye hazviregi kupa nguva dzakanaka. Wangu wandaihwina mubairo, Ana Lena, anoshamisa uye anoyemurika munyori. Kuziva isu kwakatibvumidza kubatanidza zvinangwa uye kuchinjana zviitiko. Kubva panguva yekutanga kubatana kwakange kuri kwemhedziso, uye, pasina mubvunzo, sosi yemikana yatinogovana padanho rega.
Iwe unofunga chii iwe mubairo uyu unounza iwe mukuwedzera kune iyo budiriro uye kuzivikanwa?
Ana: Mukana wekusvitsa vaverengi, chinova ndicho chinangwa chekupedzisira cheichi chiitiko. Zvinondifadza kufunga kuti muverengi wega wega anoverenga nyaya yangu anozoiita yavo, vozvivakira mukana, uye vave vakasiyana. Kuchava nezvakawanda kwazvo Izvo Vakafa Vakanyarara Sevaverengi, verenga uye mumwe nemumwe wavo achazoshandisa imwe nguva vari vega nekufunga kwavo, pamwe navo, kubva padutu remhepo rezuva nezuva iro rinotikwevera isu tese.
Fatima: Ini ndinonyorera kune yega yega yemashoko aAna.Ichi chave chinhu chisina kujairika: kugamuchira uyu mubairo unoshamisa uye kuberekwa kwenhau yako yekutanga, ichatanga kugara muvaverengi. Uye zvakare, zvave zvichinyanya kufadza kwandiri kuti ndizviite pamwe nebasa rinoitika muCanary Islands. Ini ndinofunga ichapa zvinonakidza uye zvisingazivikanwe zvinhu zvevhu rangu. Ini ndinoonawo basa rekuti mubairo weakadai kukwirwa unopa mune ramangwana mapurojekiti andinofunga.
Chii chaungataure mumitsara miviri nezve Izvo Vakafa Vakanyarara y Iyo kona yehuze?
Ana: Iyo ingano yechinyakare yekunyongana, nekubata kwechinyakare, ine mutinhimira wakawanda, nekukakavadzana, kuseka uye divi rinokakavara revanhu rinokuperekedza mukufunga kwako nguva refu wapedza kuiverenga.
Fatima: Iyo kona yehuze Iyo yakafuridzirwa nerwendo rweFrance rwe1724 rwakayera Gomo Teide kekutanga. Iyo inotsvedza pakati pezviitiko zvekutsvaga uye nerudo nyaya inomuka pakati pevatatu vayo protagonists, vaviri veFrance masayendisiti uye wechidiki mukadzi wechiCanarian, Emilia de los Celajes.
Ndeapi mapurojekiti matsva auri kuita nawo?
Ana: Kunyora inova yechitatu uye kugadzirira yechipiri, Mhondi yakavanda mumumvuri wako, kuiratidza vaverengi.
Fatima: Pakati pekunyora rondedzero yangu yechipiri, Vagari vekune dzimwe nyika, uye nezve kuda kuunza bhuku renhau neboka revanyori, Ipfupi nyaya dzevanofinha vaviri kana nyaya dzinofinha dzevapfupi mapara
Chero kunyepedzera nemanovels ako kana iwe unongoda kutaura nyaya?
Ana: Chinangwa changu ndechekuve nenguva yakanaka uye wotora chimwe chinhu navo nekusingaperi. Ini ndoda kupa vaverengi vangu nyaya inovaputira zvakanyanya zvekuti inogadzira kuchenesa kwepfungwa, kuti vanokanganwa nezvematambudziko ezuva nezuva pavanenge vachiverenga, kuti vanorarama nyaya yacho sekunge ndeyavo uye kuti vanoenda nayo ivo kana vapedza yekupedzisira. peji uye bhuku zorora pasherefu. Chinangwa ndechekuti muverengi azive nezvakanaka nezvakaipa, kuti mutsetse uve wakakombama zvekuti unofarira uye usingade musanganiswa, nekuti vazhinji vedu hatina kukwana kana kutyisa. Iwo ndeano ruzivo kubvunza izvo zvinangwa, maronda emanzwiro uye zvinofadza zvehupenyu izvo zvinogona kushandura munhuwo zvake kuita tsotsi.
Fatima: Ini ndakanga ndisina kufunga nezvekunyora nhoroondo dzezvakaitika kare, asi ndakazviwana ndakanyatsogadzikana mukati mawo, kunyangwe paine nguva huru yekuti zvinyorwa zvinoda kubvunzwa zvinodya. Zvave zvichinakidza kuvaka bhuku, kugara uchitsvaga, kuruka kukanganisa, kufamba kuenda kumashure, uyezve, rwendo irworwo rwakaitika mune dzese pfungwa: munguva, mune jogirafi, mukunzwa. Kutenda neiyi nzira ndakasangana nevanhu vanonakidza kwazvo, ndakaenda kunzvimbo zhinji kunozviona, ndakakoshesa data randaisaziva, tsika, mashandisiro musingashandisi, muchidimbu, zvave zvinonakidza. Uye kana ichinge yaburitswa, ndinotarisira kuti vaverengi vagovana chiitiko ichi uye vagorarama zvakanyanya seni. Enderera mberi nerwendo, ramba uchinyora, uye zvese zvinoverengwa zvichave zvakakurisa.
Nderipi bhuku rekutanga raunorangarira kana kuverenga? Uye imwe inokumisikidza zvine mutsindo kuti uzvipire kunyorera?
Ana: Ndakaenda kubva kuMortadelos kuna Agatha Christie. Bhuku rekutanga randakaverenga nezvake raive Katsi muDovecote, Ndinorangarira zvakakwana.
Ndakatanga kumunyorera, kuna Agatha Cristhie. Unganidzo yese yaive mumba mangu. Ndichiri nazvo zvese, mune hurombo mamiriro kubva kuhuwandu hwenguva dzandinoverenga nekudzidzokorora. Handifunge kuti ndinogona kusarudza imwe chete. Ipapo ndakaenda kuna George Simenon naCommissioner Maigret, kuna Stanley Gardner naPerry Mason uye nekudaro shanduko yese kubva muruoko rwevanyori vezvepfungwa dzepfungwa kusvika nhasi. Ini ndinoda vanyori vanozivikanwa veSpanish uye kwete zvakanyanya zvekuti ivo vakasarudza iyi genre, ini ndinotiza zvakanyanya kubva kuNordic, ayo akasimba uye akatarisisa kune mhondi dzine hunhu hunhu, kunyange izvo zvisina kutadzisa Stieg Larsson kubva ini nehunhu hwake kubva kuLisbeth Salander kana kudya iyo yese Henning Mankell muunganidzwa uye kuva fan yemutikitivha wake Walander. Imwe yaizondimaka kunze kweiyo genre? Hapana chinoshora husiku naDelphine de Vigan. Kungozviona pasherufu yangu, ndinodzoreredza manzwiro aakandipa. Iko kuvhura munzira yehupenyu hwake naamai bipolar, kushungurudzika kwake, kukuvara kwake, manzwiro ake.
Fatima: Ndinoyeuka mabhuku aive mumba kwasekuru nasekuru vangu, vaive vadzidzisi vechikoro uye vaive nemashefu akazara navo. Paiva nezvakawanda: paive nengano, nyaya, majee. Zvichida mhosva yandaifarira yenyaya dzekushanya uye ngano yaive Ivanhoe. Zvino kwakauya ngano dzeArthurian, zviwi zvisinganzwisisike, nzendo kusvika kumagumo enyika, muchadenga kana kune ramangwana. Ndakakurira naJules Verne, Emilio Salgari, kunyangwe imwe hondo yeGaldós yakazadza rimwe zhizha. Asi kune vanyori avo, kana vachiaverenga, vakamiririra kumberi uye shure nekuti vazunza zvandinotenda. Izvi hazviite chinhu chakafanana kana iwe uchida kunyora. Chinhu chakadai chakagadzirwa naGabriel García Márquez pandakaverenga Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa. Zvese zvaive zviripo, yaive imba yechiedza. Ini ndinoiverenga zvakare uye ini ndinogara ndichidzidza chimwe chinhu chitsva mune zvese zvinhu zvaro: rangano, murondedzeri-munyori wenhoroondo, musha-zvakasikwa zvevatambi, mutauro. Zvese izvi zvakarongedzwa neunyanzvi hunoshanda kwazvo, sezvo ichiwana kufarira nguva dzose kunyangwe kupera kwenyaya kuchizivikanwa. Zvinoshamisa.
Ndivanaani vanyori vako vakuru? Uye ane simba kwazvo pabasa rako?
Ana: Vazhinji, asi pamusoro pezvose ndinotarisira bhuku rega rega naJose María Guelbenzu mumapurisa ake akateedzera Mariana de Marco, yega yega Brunetti adventure muVenice naDonna León, kana naJean-Luc Bannalec nemutungamiriri wake Dupin muBrittany French, naPetra Delicado, muBarcelona, ​​Alicia Giménez-Barlett uyo akandibata makore mazhinji apfuura.
Fatima: Hakuna mumwe munyori kana munyori anokujekesera iwe. Ichokwadi kuti Gabriel García Márquez mutambi. Asi nyika haina kugumira ipapo, asi yakatanga. Kune vazhinji vanyori vakandifadza, semuenzaniso, Cortázar, Kafka kana Lorca.
Iwe unayo chero mania kana tsika kana uchinyora?
Ana: Virginia Woolf aigara achitaura kuti mukadzi anofanira kunge aine mari uye kamuri yake kuti akwanise kunyora zvinyorwa. Ndinoda nguva nekunyarara. Maawa akati wandei akanyarara uye zvese zvinotanga kubuda. Handimbozive zvandichanyora, kana chii chichaitika munoverengeka. Maitiro anonakidza kwazvo nekuti ini ndinonyora nemanzwiro emuverengi uyo asingazive zvichaitika mune inotevera chiitiko.
Ndinoyeuka rimwe zuva pandainyora ndiri pakati pe Izvo Vakafa Vakanyarara uye ndakafunga kuverenga zvekare zvandaive ndakapfeka kuti ndirambe ndichienderera. Ndakapinda mukuverenga zvekuti ndakatanga kunzwa kunetsekana kwemuverengi ndikazvibvunza kuti "X haasi iye mhondi here?" Kusvika ndaziva kuti ndini munyori uye kuti mhondi yaizove yandakafunga. Dzimwe nguva ndinofunga kuti ini handisarudze chero chinhu, kuti iyo novel inonyorwa mune imwe kona yepfungwa dzangu uye ini ndinongozvinyora pakombuta.
Fatima: LOL. Chii Ana chinoshamisa? Zvakanaka. Ichokwadi kuti kana iwe ukapinda mu "trance" iwe unosvetuka kubva kuchokwadi kuenda kune imwe nyika yakafanana. Dzimwe nguva zvinoita sekunge ruoko runonyora roga uye kuti urikufambisa zano rinofamba nemhepo. Ndine nzvimbo yekufungisisa uye ndinogona kunyora chero kupi uye nechero ruzha. Muchokwadi, vanhu vanosangana neni zuva nezuva vanogara vachindiona nekombuta yangu musvo. Ndine mabhuku ezvinyorwa munzvimbo yese yekubata "zvakazarurwa." Chandinoda kujekeswa nezvacho ndiko kupera kwenoverengeka. Ini handizive zvimwe zvese, ini handizive zvikonzero, kana ndiani, kana sei, asi zvese zvinoitika zvakagadzirirwa iwo mugumo, magineti anodya iyo inozha yese.
Uye kana iwe wapedza, iwe unobvunza nharaunda yako kuti uwane maonero, kuraira kana kururamisa?
Ana: Pandinopedza, ndine Betareaders Club, iyo inoverenga inoverengeka uye inondiudza nezvemanzwiro avo sevaverengi uye magafesi avanowana mairi. Vamwe vanhu vepedyo, vamwe ini handitoziva, uye kwandiri kwandiri ipfuma. Ini ndinotenda kuti pasina ivo zvinyorwa zvangu zvingadai zvisina kupera.
Ndine rombo rakanaka kuva nevanyori vaviri vane hunyanzvi kubva kuzvizvarwa zviviri zvakasiyana, Jose María Guelbenzu naLara Moreno, sevapi vemazano uye mumwe nemumwe wavo anonongedzera kusawirirana kwangu uye nekundionesa zvikanganiso mumanovel angu kuti dai pasina ivo ndaisazombosvika .kugadzirisa uye kupukuta kuvasiya izvo muverengi akakodzera kuzvigamuchira.
Fatima: Panguva yekunyora yekunyora Iyo kona yehuze Ndakave nezano remumwe wevadzidzisi vangu vezvinyorwa, munyori mukuru Jorge Eduardo Benavides, anga ari mutungamiri mukuru we "kuongorora" bhuku iri. Ndakaumba timu yevaverengi vana vanotyisa kubva munharaunda yangu (amai, murume, hanzvadzi uye shamwari), vese vakasiyana mukuona kwavo uye mukuravira kwavo kwekunyora kwakashanda sekambasi.
Ungatsanangura sei masitaera ako?
Ana: Nyowani, mvura, inokurumidza, yemazuva ano, yemazuva ano. Mumanovels angu, muverengi anomira kwenguva refu mune mafrills, zvinhu zvinoitika nekukurumidza senge mune terevhizheni script.
Fatima: Zvakaoma kutsanangura uyu mubvunzo. Ini ndinogona kushandisa izwi kubva kuhunyanzvi hwepurasitiki: expressionism. Ndinoda kuongorora nuances yemashoko, simba rawo, ndinoda kutamba nesynesthesia, madimikira, kunyangwe ndichifunga kuti mazuva ano zviri nyore, mutauro wakashama unokosheswa.
Ibhuku ripi rauri kuverenga izvozvi?
Ana: Iwe unondibata mune imwe nguva isingawanzo kuitika: Ndine mabhuku maviri uye kana iri nhoroondo yematsotsi. Imwe ndeye Kufa kwababa rakanyorwa naKarl Ove Knausgard. Iri ibhuku rekuverenga zvishoma nezvishoma, uchifunga, munyori anovhura musuwo mukuru kune manzwiro ake uye anotibvumira kutarisa mukati. Chimwe chipo chinobva kumuparidzi Galaxia, Mukomana akangwaranaXosé Monteagudo. Vanozvigadzirira izvo zvandangopedza Munhu anofa rakanyorwa naDonna León uye Hofisi Yezvakaipa naRobert Galbraith (JK Rowling).
Fatima: Ndine chinopinda usiku. Nhoroondo yechitsuwa chisina izwi, naVanessa Monfort, iye wandafambira mberi uye wandiri kubatanidzwa naye, uye mumutsara, Ruvara rwemukakarakanyorwa naNell Leyson, uye 4, 3, 2, 1naPaul Auster.
Iwe unotsunga kupa rimwe zano kune avo vanyori vari kutanga kutanga?
Ana: Regai vanyora zvavanoda kuverenga, nekuti nenzira iyoyo vachatenda mune ravo basa uye vazive kuti vasati vapedza vanotova neyavo wekutanga asina fanika. Chokwadi kune vamwe vanhu vanofarira zvakafanana nezvavanoita uye avo vanozove vaverengi vako. Kana zvisiri, ivo vanomhanyisa njodzi yekuti basa ravo harizovade ivo kana chero munhu uye hapana nyaya inokodzera izvozvo.
Fatima: Mubvunzo wakaomesesa. Kune avo vanotanga, musamire. Iwo mujaho wedaro refu, wekudhonza tambo, wekuzvizivisa wega, wekuzvipaza nekuzvidzorera kumashure pamwechete, asi haugone kumiswa. Tinofanira kutyora ngano yekutya iyo isina peji peji. Iwe unofanirwa kugara pasi uchinyora mazwi. Pakarepo, zvese zvichaonekwa. Uye kana nyaya yazvarwa, iverenge zvakare, igadzirise, itsigire, ikwidziridze uye uende nepose pazvinogona, nekuti isu tatova na "kwete" tisingaite chero chinhu.
Zvakanaka, tinokutendai nemhinduro dzenyu uye mutsa. Uye isu tinokushuvira iwe zvimwe zvakawanda budiriro mumabasa ako ezvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Tinotaura naAna Rivera Muñiz naFátima Martín Rodríguez, Torrente Ballester Award 2017